साहित्य Archives - नागरिक रैबार
बिसीको उपन्यास ‘रमा’ सार्वजनिक
लामो समयदेखि सुर्खेतमा रहेर पत्रकारिता गर्दै आएका पत्रकार पुनम बिसीको उपन्यास सार्वजनिक भएको छ । पत्रकार महासंघ सुर्खेत शाखाको स्थापना दिनको अवसर पारेर विसीले उपन्यास ‘रमा’ विमोचन गरेका हुन् । विसीको यो पहिलो उपन्यास हो । उनले ‘रमा’ मा एउटा नारीलाई पात्रको रुपमा उतारेका छन् । उनले भने,‘ विशेषगरि कर्णालीका सबैजसो जिल्लाहरुमा रगत अभाव न्यूनीकरणका […]
कविता : मानुषी
तिमी जति गर्न सक्छौ त्यति म पनि गर्न सक्छु तिमी जत्तिकै पाखुरी बजार्न सक्छु पसिना बगाउन सक्छु तिम्रा सबै अनुभूतिहरू मेरा पनि अनुभूति तर इतिहासले आज कहाँ ल्याएर पछार्‍यो कुन्नि मलाई तिमी त मभन्दा कोसौँ अघि गइसकेछौ । तिमी र म एउटै होइनौँ एक–अर्काका पूरक मात्र हौँ त्यसैले तिमी मेरा थुप्रै अनुभूतिहरूका भागिदार हुन […]
त्यो रात कसले आगो लगायो ?
खेलामा नुहाउन गएकी छायाले भित्री वस्त्र खोल्दै पातलो सेतो चुन्नीले आफ्नो निर्वस्त्र शरीर छोपिन् । नुहाउँदै गर्दा उनले आफ्नो अनुहारदेखि पैतलासम्म साबुन लगाइन् । खोलाको पानीमा उनको सग्लो शरीरको प्रतिबिम्ब देखियो । त्यो सुकुमार शरीर कम्ता आकर्षक देखिएन । खोलाको पानीमा डुब्बी लगाएर माथि उठ्दा पानीभित्रै सेतो चुन्नीको अस्तित्व हरायो र चुन्नी अब सेतो मात्र […]
किन छोरी भएछु
आज विनिताको भुईंमा खुट्टा छैन । खुसीले फुरुङ्ग छिन् । वर्षौंपछि उनी धित मरुञ्जेल बुबाको छातीमा लुटुपुटु हुनेछिन् । बुबा कतिबेला आइपुग्छन् ? विनिता अधैर्यसाथ पर्खिरहेकी छन् । उनलाई त विद्यालय जान नपरे पनि हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ । तर कसलाई भन्ने ? पाँच वर्षअघि, ठ्याक्कै आजकै दिन । बुबा मलेसिया गएका थिए । बुबा […]
स्वतन्त्रताको उडान भर्ने ‘मनबहादुर’
मदन घिमिरे चर्चित चलचित्र निर्देशक हुन् । आमाको माया, घर संसार, कस्तो साइनो, माया नमार, फैसला, स्वाभिमान, म छु नि तिम्रो, मिस्टर डन, भागी भागी नजाऊ जस्ता धेरै चलचित्रको उनले निर्देशन गरेका छन् । उनै घिमिरेले लेखेको पहिलो उपन्यास हो, ‘मनबहादुर ।’ आम पाठकको मन छुने खालको कथावस्तु रहेको मनबहादुर भुइँमान्छेका पीडाहरू समेटेर लेखिएको सामाजिक […]
पिर : केही तरंग, केही प्रश्न
कलाकार प्रकाश सपूतले गाएको गीत ‘पिर’ शीर्षकमा युट्युबमा जारी भएपछि त्यसले राजनीतिक वृत्त, सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा अनेकौं प्रतिक्रिया र तरंग उत्पन्न गर्‍यो । गीतको शब्द, संगीत र गायनमा कुनै विवादका कुरा छैनन्, विवाद उत्पन्न गरेको थियो त्यसको दृश्यांकनले । यस गीतको प्राणतत्त्व भनेकै दृश्यांकन हो । प्रकाश सपूतको प्रस्तुति–शैली वा विशेषता भनेकै गीत र गीतका भिडियोले गीतसँगै […]
गल्ती मेट्ने इरेजर भइदिए …
विमललाई लाग्छ उनको आजसम्मको जीवन एक सपना भइदिए हुन्थ्योझैं लागेको छ । जहाँ राति देखेका नराम्रा सपना, बिहानको उज्यालोमा हराएर नयाँ बिहानी शुरु भएझैं जीवन पनि पुराना गल्तीलाई थाँती राखेर अघि बढाउन पाए हुन्थ्यो झैं लाग्छ । रातिको १२ बजिसकेको थियो उनी निदाउन सकेका थिएनन् । दाहिने हातको सिरानी बनाई आकाशका तारातिर आँखा डुलाउँदै, उनले […]
पुल तरेर पारि पुगेपछि अकस्मात पानी पर्‍यो । यो पानीलाई यतिबेला नै किन पर्न परेको होला ? गर्मी थियो, त्यसैले पर्‍यो । पर्नु उसको धर्म हो, भिज्नु हाम्रो बाध्यता । छाता थिएन, त्यो हाम्रो कमजोरी थियो । तर हिँड्दा आकाशमा हेरेकै हो । खाली थियो आकाश, थिएन कतै उडन्ते भुवा । म भिजें, उनी भिजिन्, […]
महिला हप्काइरहेका लोग्नेहरू
८ मार्च भर्खरै सकियो । यो दिन आउनुअघि नै हामीले आ–आफ्ना संस्थाका कार्यक्रम–योजना सुनायौँ । सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट उपस्थितिका लागि अनुरोध गर्ने भनियो । तर, कार्यक्रमको अन्तिम दिन अर्थात् ८ मार्चकै दिन समयमा कोही आइपुगेनन् । बिस्तारै केही नारीहरू आउन थाले । किन ढिलो ? कसैले भने– खाना बनाउँदा बनाउँदै ढिला भयो । कसैले भने– दुई बाटा लुगा धुनु थियो त्यो सक्दा […]
सुदूरपश्चिमको ‘सुगन्धपुर’को सुदूरपूर्वमा चर्चा
सुनसरी — सुदूरपूर्व झापामा पोइट्री टक्स काव्य विमर्शमार्फत सुदूरपश्चिमको कथा बोकेको कथासंग्रह ‘सुगन्धपुर’को परिचर्चा गरिएको छ । कथाकार विश्व कुइकेलको कथासंग्रह ‘सुगन्धपुर’माथि सोमबार बुद्धशान्ति गाउँपालिकास्थित बुद्ध आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा परिचर्चा गरिएको हो । पूर्वका साहित्यकारहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न परिचर्चामा टिप्पणीकारहरूले कथासंग्रहभित्रका कथाहरूले दलितका मुद्दा, नारीको यौन अधिकार, कर्णालीको विकटता र दुःख, लिपुलेक टिङ्कर क्षेत्रको समस्यामाथि बोलेको […]
पछिल्लो समय किशोर पुस्तामा पुस्तक पढ्ने बानिको विकास हुँदै गएको छ । किशोर पुस्ताले स्कुल-कलेजका किताबबाहेक नेपाली साहित्य (खास गरेर उपन्यास) पढ्न थालेका छन् । किशोर मनोविज्ञानमा लेखिएका समर लभ, साया, गुलाबी उमेरजस्ता उपन्यासहरूले जबरजस्त पाठक समूह तयार पारेको मानिएको छ । समर लभ र साया उपन्यासका लेखक सुविन भट्टराई नेपाली साहित्य पढ्ने किशोर पुस्ताको […]
पुरुषलाई पनि जलाउने सती
पतिको शवसँगै पत्नी जलाउने क्रूर सती प्रथा अन्त्य भएको १०० वर्ष नाघेको छ । १९७७ सालमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले नेपालबाट अन्त्य गरेको सती प्रथाको विकासक्रम, उत्कर्ष र प्रतिबन्धसम्म बुझाउने प्रयत्न हो, ‘सतीः इतिहास र मीमांसा’ । सुजित मैनालीकृत ‘सती’मा पुरुष सत्ता स्थापना गर्न कुन कालखण्डमा कस्तो धार्मिक ग्रन्थ र किम्बदन्ती रचना गरियो, जसले सती जस्तो […]
‘पानीमा रुझ्नु हुँदैन’ चित्रकथा प्रकाशित
सुशीला प्रधानाङ्गको लेखन र सञ्जीप कँडेलको चित्राङ्कन रहेको ‘पानीमा रुझ्नु हुँदैन’ शीर्षकको चित्रकथा प्रकाशित भएको छ । चित्रकथाको प्रमुख पात्र ईश्वरसँग पानी परेको बेला विद्यालय जान रेनकोट हुँदैन । त्यसैले, आमाको बिग्रेको छाता ओढेर जान्छ । झुत्रे छाता भनी साथीहरुले जिस्काउँछन् । तर नराम्रो नमानी बरु अरु साथीलाई पनि पानी परेकोबेला ओट दिन्छ । पुस्तकमा […]
विकास सबैको प्रिय शब्द हो । गोरेटो बाटो जति सबै मोटरबाटो बने हुन्थ्यो भन्ने चाहना हामी सबैको हुन्छ । तर, त्यही विकासले कतिपयको पुख्र्यौली र जातीय पहिचानसँग जोडिएका कामहरु चौपट बनाइरहेको हुन्छ । यस्तै भइरहेको छ- भेँडाको उनबाट बनेको राडीपाखी बोक्ने गुरुङहरुलाई । लेकको जडीबुटी बोकेर पहाड र्झने शेर्पाहरुलाई । तराईबाट शिरकको खोल बनाउनउकालो लाग्ने […]
जिन्दगीको के भरोसा, यो त सानो खेलौना हो दुई आँखामा एकमा हाँसो, अर्कोमा रुवाइ छ …। लोकप्रिय गायक कर्णदासको यो गीत ल्यापटपमा लगातार बजिरहेको छ । गीत जस्तै छ जिन्दगीको परिभाषा पनि । सरल भाषामा भन्नुपर्दा वा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा जिन्दगीको यकिन छैन, कहाँ, कहिले के हुने हो भरोसा छैन । ‘के हो जिन्दगीको परिभाषा ? […]
साहित्य बिसीको उपन्यास ‘रमा’ सार्वजनिक